Iifoto ZaseWallkill (NgoNovemba 2014 Ukuya Kutsho NgoNovemba 2015) | JW.ORG/XH
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiCatalan IsiCebuano IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalay IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiValencian IsiVietnam IsiXhosa
Iifoto Zesibini ZaseWallkill (Ukususela NgoNovemba 2014 Ukuya Kutsho NgoNovemba 2015)
AmaNgqina KaYehova andise aza alungisa izakhiwo zawo eziseWallkill, eNew York. Ezi foto zibonisa indlela ohambele phambili ngayo lo msebenzi phakathi kukaNovemba 2014 noNovemba 2015.
Ifoto yesakhiwo saseWallkill ukususela ngo-Oktobha 15, 2015.
ISakhiwo Seeofisi 1
ISakhiwo E Sokuhlala
ISakhiwo Sokuhlamba Iimpahla
ISakhiwo Seeofisi 2
NgoDisemba 4, 2014​—ISakhiwo Seeofisi 2
Kulungiswa indlela engakumnyango wesakhiwo seofisi. Indlela ekuhanjwa kuyo yenziwe yakhuseleka ukuze bangatyibiliki abantu xa behamba kuyo ebusika. Kwesi sakhiwo kukho iOfisi YaseBheteli, iOfisi YeKomiti YeSebe neSebe Lenkonzo.
NgoDisemba 5, 2014​—ISakhiwo D Sokuhlala
Umzalwana osebenza kwiSebe Elijongene Nokuhombisa Ngaphakathi usebenzisa umatshini wokulungisa phantsi ngaphambi kokuba kufakwe izinto zokugqibela. Lo matshini ufakwe kwivacuum ephungula uthuli.
NgoJanuwari 9, 2015​—ISakhiwo E Sokuhlala
Bafikela kule ndawo ilungisiweyo abantu abatyeleleyo nabo baseBheteli abangaphezu kwe-200 abahlala kwiSakhiwo E. Ngela xesha bekulungiswa ngalo esi sakhiwo kufakwe iifestile ezonga umbane kunye neealam ezintsha ezinceda xa kusitsha.
NgoFebruwari 9, 2015​—ISakhiwo Sokuprinta
Umzalwana osebenza ngezobungcisa ufaka iintambo zombane kwisakhiwo ekuqeqeshelwa kuso. Esi sakhiwo senzelwe ukunceda abasebenzi babe nobuchule bokulungisa imibhobho yamanzi, umbane nezinye izinto ezinento yokwenza nokhuseleko.
NgoFebruwari 17, 2015​—ISakhiwo Sokuprinta
Umntu osebenza ngombane ufaka isibane kwisakhiwo esitsha ekuqeqeshelwa kuso ubuchule bezinto zeteknoloji.
NgoMatshi 2, 2015​—ISakhiwo Seeofisi 1
Udade ujonga ukuba iqelelene kangakanani imibhobho yombane. Le ndawo iye yalungiswa ukuze ibe kuyo iofisi yesebe ebikade iseBrooklyn.
NgoMatshi 3, 2015​—ISakhiwo D Sokuhlala
Umzalwana ulungisa imibhobho eza kuphuma amanzi ashushu.
NgoMatshi 31, 2015​—ISakhiwo D Sokuhlala
Abantu abakwisebe elisebenza phandle balungisa ifestile ngoxa bekhwele kwilift. Ezi festile ziyi-298 kwesi sakhiwo sisodwa, zonga umbane ehlotyeni nasebusika.
NgoAprili 17, 2015​—ISakhiwo Seeofisi 1
Umntu owakha ngamatye, usebenzisa amatye odonga olwalukho ukususela kwiminyaka yoo-1970, wakha udonga olutsha kwindawo yokupaka iimoto ephakathi kweSakhiwo Seeofisi 1 neSakhiwo E Sokuhlala.
Umzalwana ulungisa udonga ukuze lupeyintwe. Kwesi sakhiwo kukho isebe lokubala imali, eleekhompyutha nelokuthenga izinto.
NgoJuni 8, 2015​—ISakhiwo D Sokuhlala
Umzalwana osebenza ngombane utsalela intambo kwintonga ekhusela xa kududuma. Le ntonga ikhusela esi sakhiwo ngokuthi umbane ubethe emhlabeni kunokuba ubethe kuso.
Ngoxa bekusandiswa esi sakhiwo saseWallkill, ziye zagadwa izinto ezingaphandle ukuze zingamoshakali, kuquka nemithi evelileyo kulo mfanekiso. Itanki elisekhohlo lineelithe eziyi-150 000 apho afumaneka khona amanzi nawokucima umlilo kwisakhiwo saseWallkill.
NgoJuni 25, 2015​—ISakhiwo Seeofisi 1
Umzalwana wenza udonga olungasemva lweholo laseBheteli ngamaplanga ayi-1 800. La maplanga makhulu anciphisa ingxolo.
NgoJulayi 9, 2015​—ISakhiwo Seeofisi 2
UCharles Reed ukhonze eBheteli ukususela ngo-1958. Umzalwan’ uReed ebencedisa ekwenzeni nasekufakeni izitena kwiindawo zokuprinta xa iBheteli yaseBrooklyn yayisenzela iMerika namanye amazwe iincwadi. Ngoxa bekulungiswa iWallkill, umzalwan’ uReed ebesebenza neqela eliqinisekisayo ukuba imisebenzi yenziwa kakuhle.
NgoAgasti 17, 2015​—ISakhiwo Seeofisi 1
Abasebenzi bothula izitulo zeholo laseBheteli. Eli holo linezitulo eziyi-812.
NgoSeptemba 21, 2015​—ISakhiwo Seeofisi 1
Ngoxa bekulungiswa iholo laseBheteli kufakwe izixhobo zokubukela iividiyo nesilingi ebangela ivakale kakuhle loo nto imanyelweyo.
Ngo-Oktobha 12, 2015​—ISakhiwo D Sokuhlala
Kulungiswa indawo aza kuhlala kuyo unesi, kwindawo abancedwa kuyo abantu abagulayo eBheteli. Yenziwe yankulu ipaseji namagumbi angasese ukuze bakhathalelwe kakuhle abantu abagulayo.
Ngo-Oktobha 15, 2015​—ISakhiwo SaseWallkill
Ifoto yesakhiwo saseWallkill, esinabantu abaphantse babeyi-2 000. Umsebenzi obusenziwa eWallkill wezakhiwo ezitsha nezilungisiweyo ofikelela kwiimitha ezingaphezu kwe-102 000 ugqitywe ngoNovemba 30, 2015.